Yintoni eyahlukileyo phakathi kwe "Track" kunye ne 'Tract'?
Nendlela yokuwasebenzisa ngokufanelekileyo
Amathrekhi namaphecana amancinci athile: atyandile efanayo kodwa aneentsingiselo ezahlukeneyo.
Njengesibizo, ukulandelela kuthetha indlela okanye indlela, umzila okanye inkambo. I-traject track nayo ibhekisela kumqondiso osele kumhlaba ngumntu ohambayo, isilwanyana okanye isithuthi. Njengesenzi, ukulandelela kuthetha ukuhamba, ukuphishekela, okanye ukulandela.
Inqaku lebizo linenani elithethayo: ummandla wendawo okanye amanzi, uphuhliso lwezindlu, ipheflethi equkethe isibhengezo okanye isibheno, kunye nenkqubo yezitho kunye nezicubu zomzimba.
( Amaphecana aqhelekileyo emzimbeni womntu afaka i-digestive tract, i-intestinal tract, indlela yokuphefumula, kunye neendlela zokungena emzimbeni.)
I-Tarmac yanika indlela yokungcola kwidolophana yaseJowai.
Kwiminyaka yangaphambili, uBessie wayevame ukuphendula iileta, ukubeka isheke, ukugcina ingeniso yakhe kunye neendleko zakhe.
(Isaac Bashevis Umculi, "Inqobo." I-New Yorker , 1970)
"Akukho mntu ufuna ukuhlala 'kwindawo yokuhlala,' 'indawo yokuhlala' okanye 'iprojekthi yezindlu.' Abayithandi ngokukodwa ngabacwangcisi kunye nabaqulunqi abazenzayo iindawo, kwaye ngubani na osoloko ebeka ityala lokuphindaphinda kwabo. "
(Tom Turner, isiXeko njengoMhlaba: I-Post Post-Modern View of Design and Planning .
I-diver efihliweyo phakathi kwemihlathi yeshaka ukudiliza isikhonkco sokubamba esasibambelele kwisigxina sezilwanyana.
Ngo-1774, uTomas Jefferson wabhala ipheshana lakhe lokuqala kwizopolitiko, isethi yemiyalelo yabameli baseVirginia kwiContinental Continental Congress.
"[ Umkhondo kunye nephepha ] ngamanye amaxesha udidekile, kuba amaxesha angamaqhinga angabonakaliyo maxa wambi kunzima ukuhlukanisa intetho eqhubekayo ."
" Ukulandelela yi- gerund yesenzo sesenzo kunye neendlela zokulandela inkambo ethile, njengokuba kuguquguqukayo - 'i-meteorologists ilandelela isiphepho' - kunye nokusetyenziswa okungenasiphelo - 'isithwathwa sisilandela emhlabeni ngeekhilomitha ezingama-30 ngeyure. ' Umzila uthetha 'ukulandelelana' kwaye uhambelana neymologically ngephepha , elivela kwiingcambu zesiLatini, inxaxheba elandelelweyo yecatterus , isenzo sokudweba (kunye) kunye nesenzo sokudweba. "
(Kyna Leski, Isiqhwa Sobunono : I-Eye View Eye . I-MIT Press, 2015)
(a) Wathengile i- _____ yomhlaba ngasempuma-mpuma eTennessee.
(b) Oorhulumente kufuneka bajonge uluhlu lwezinketho zokufumana uqoqosho lwazo emva kwe- _____ emva kwemali.
(c) "I-intestinal _____ yethu igcwele 'ibhaktheriya enobungane' onomsebenzi ukusigcoba ukutya kunye nokulwa neebhaktheriya ezingenabuhlobo obangela izifo."
(Ann Louise Gittleman, I-Fast Track I-Day-Day Detox Diet .
(a) Wathenga umhlaba othile kumntla-ntshona yeTennessee.
(b) Oorhulumente kufuneka bajonge uluhlu lwezinketho zokufumana uqoqosho lwazo emva kwendlela yokuhamba kwemali.
(c) "Iiphecana zethu zamathumbu zigcwele 'iibhaktheriya ezinobungane' onomsebenzi wokusondla ukutya kwethu nokulwa neebhaktheriya ezingenabuhlobo ezibangela izifo."
Yeka, usebenze, kwaye unqande
Amagama aqhelekileyo adidekile: Ukuphumelela kunye neSigaba
Ingelosi kunye neNgle
Jam kunye noJamb
Bat Magic kunye neNkcubeko
Imibala emnyama kunye neePet Stains
2016 Ukubhaliswa kwe-TOEIC kunye neeNvavanyo zoVavanyo
Indlela Yokuthetha Ngibongayo kwaye Uyamkelwa ngesiJamani
UkuPapashwa koBomi boovulindlela
Iimpawu zokudibanisa imibala
I-Medieval Chivalric Romance
Yidla ngokufanelekileyo kwiCandelo lokuPhuphuma kweDwala
"Skadoosh!" Iinqununu ezingama-5 ze-Kung Fu Panda
Iifayile zeEksodus ezilungileyo
Ziziphi Iingxenye zeTheyeri yePeriodic?
Kutheni i-Blue Blue kwiNyukliya yeNyukliya? - Cherenkov Radiation
UbuNtu boLuntu-iNkcazo kunye nokuthelekiswa